Vokatry ny Covid-19: nidina ho 1 858 miliara Ar ny hetra niditra | NewsMada
Vokatry ny Covid-19: nidina ho 1 858 miliara Ar ny hetra niditra
Maromaro ny volavolan-dalàna nankatoavina nandritra ny filankevitry ny minisitra, natao ny 20 mey teo. Anisan’izany ny mikasika ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020, milaza fa nidina ho 1 858,8 miliara Ar ny fampidiran-ketra. Nitombo 2 034,9 miliara Ar ny fanampiana sy ny famatsiam-bola. Nitombo 646 miliara Ar ny fandaniam-bolam-panjakana, izay mifantoka kokoa amin’ny angovo. Mitentina 200 miliara Ar ny tetibola ho an’ny drafitra sosialy amin’izao tranga Covid-19 izao.
Mila 108 miliara Ar ny fitantanana ny volam-panjakana amin’ity taona 2020 ity, ho an’ny fampianarana, ny fahasalamana, ny rano sy ny fidiovana, ny toeram-ponenana, ny angovo, ny fanamboaran-dalana.
Nankatoavina ny hampidirana ao anaty kitapom-bolam-panjakana ny famatsiam-bola 165 tapitrisa dolara (630 miliara Ar) ao amin’ny Banky foibe, azo tamin’ny Tahirimbola iraisam-pirenena (FMI). Hampiasaina amin’ny fifandanjan’ny vola aloan’ny fanjakana (balance de payment) io vola io, ao anatin’ny Fanamorana fampindramam-bola haingana (FCR).
Manampy ireo, nankatoavina ny findramam-bola 179 miliara Ar, avy amin’ny banky sinoa Export Import Bank, hanatsarana ny fifandraisan-davitra ho an’ny paositra eto Madagasikara. Toraka izany koa ny fanatsarana ny tetikasa fanatsarana ny fifandraisan-davitra sy ny herinaratra PRIR TEM I, iarahana amin’ny Banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Bad) sy ny Tahirimbola afrikanina ho an’ny fampandrosoana (Fad). Nankatoavina koa ny findramam-bola avy amin’ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI), hanatsarana ny famatsian-drano Tetikasa, Jirama water III.